Andriamatoa Bian Zushan
Mpitendry mozika malaza, Cantor
Filohan'ny Sendikan'ny Symphony China taloha
Bian Zushan no nahazo diplaoma voalohany tao amin'ny Departemantan'ny fitondran-tena ao amin'ny Conservatory of Music of Shanghai ary ilay mpitarika ny toerana voalohany teo amin'ny Central Ballet Troupe ary filohan'ny Union China of Symphonic Orchestra.
Nandritra izay 46 taona lasa izay, Bian Zushan dia nitendry sy nilalao ballet sinoa sy vahiny toa an'i Giselle, Swan Lake, Red Detachment of Women ary Lin Daiyu. Vao tsy ela akory izay dia nitendry orkestra tany USA, Great Britain, Russia, Phillipines ary Suisse izy izay nahazoany dera tamim-pahazotoana sy fanamarihana mahafinaritra. Tamin'ny faha-76 taonany, dia hita matetika amin'ny maha-mpampita hazakaza-tsaina azy an'izao tontolo izao izy.
Taorian'ny nanesorana ny fameperana niampitana ny sisintany dia nitarika ny Central Ballet Troup i Bian Zushan tamin'ny fampisehoana 10 tao amin'ny Farihy Swan manodidina an'i Taiwan tamin'ny taona 1992. Amin'ity indray mitoraka ity dia mitantana ny Orkesitra tanora tanora Philharmonic Taipei sy ilay mpitendry piano malaza any Taiwan Jun-Jie Yan amin'ny fampisehoana an'i Myaskovsky izy. : Symphony No.27 ao amin'ny lapan'ny konseritra nasionaly ao Taipei.
Piano piano mpitety faritany tanora
Lan CUI, Pianist ary profesora ao amin'ny Conservatory of Music of Shanghai, manome azy ireo rindran-kira sy efitrano fandraisam-bahinin'i Chine, Eropa ary Etazonia.
Nanomboka nianatra piano tamin'ny 4 izy, niditra tao amin'ny conservatory tamin'ny faha-12 taonany, taorian'ny nahazoany diplaoma Bacherlor tao amin'ny Shanghai Conservatory of Music, nianatra tao amin'ny Royal Conservatory Brussels tao amin'ny kilasin'i Daniel Blumenthal izy. Tamin'ny taona 2005 dia nekena ho mpianatra feno scolarship tao amin'ny Queen Elisabeth College of Music izy teo ambanin'ny kilasy piano an'i Abdel Rahman El Bacha, ary ny kilasin'ny mozikan'ny Jean-Claude Venden EydenIn ary nahazo ny mari-pahaizana "Master aorian'ny Master" avo indrindra nomen'ny ny Mpanjakavavy Paola Belzika. Mandritra izany fotoana izany dia nahazo ny diplaoman'ny mpanakanto mozika Piano sy Chamber tao amin'ny Antwerp Conservatory izy teo ambanin'ny kilasin'i Levente Kende sy Josef De Beenhouwer.
Nandray anjara tamina kilasy mavesatra maromaro nomen'ny pianista malaza izy, ohatra,
Lee Kum Sing, Chen Hung-Kuan, Hans Leygraf, Charles Rosen, Karl-Heinz Kammerling, Aldo Ciccolini, Badura Skoda, Menahem Pressler, Vladimir Krainev, Pascale ROGE ary Dominique Merlet, sns.
Nanome kaonseritra mozika fialantsasatra sy efitrano fandraisam-bahiny marobe izy tao amin'ny Shenyang Grand Theatre, Shanghai Conservatory, Shanghai Concert Hall, Shanghai Grand Theatre, Shanghai Oriental Arts Center, Brussels Royal Conservatory, Brussels MIM, Brussels Flagey, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Holland Music Session, kaonseritra Holland ZA, Fetiben'ny fahavaratra mahafinaritra, Festival de Menton any France, ary Great Lake Music Festival any Etazonia, sns.
Niaraka nanao fampisehoana niaraka tamin'ny Prima la Musica Orchestra sy Royal Chamber Music izy
Orchestra of Wallonie notarihin'i A.Dumay. Izy no nasaina ho any amin'ny masterclass sy kaonseritra an'ny Academy Villecroze any Frantsa ary omena Masterclass sy recital matetika ao amin'ny Xinjiang Art Institute of China. Nanoratra sanganasa sy lahatsoratra maro ho an'ny magazine izy izao, ohatra, "Piano Artistry" sy "journal Academic of Shenyang Conservatory". Namoaka ny DVD "CUI Lan Piano Recital-Ravel piano works" izy tamin'ny 2015.
Izy no Laureat tamin'ny fifaninanana Piano International André Dumortier tamin'ny volana aprily
2003, Fifaninanana Piano YAMAHA Piano tamin'ny taona 2004, Fifaninanana Piano iraisam-pirenena Musica Aeterna tamin'ny Aogositra 2007, ary nahazo ny loka voalohany tamin'ny Fifaninanana Piano Internationale Valmalète tany Paris izy.
Mpikaroka "Program Hundred Talents" mpikaroka Akademia sinoa "Mpampianatra Doctorat
Tale, Institute of Semiconductors, Akademia Sinoa momba ny siansa (CAS)
Mpampianatra amin'ny sekolim-pahaizana momba ny siansa Akademia siansa
Mpanara-maso sy mpikaroka dokotera, Ivotoeran'ny akustika, Akademia siansa momba ny siansa (CAS)
Tale, Laboratoara akustika momba ny fifandraisana, Akademia siansa momba ny siansa
Tale, Ivotoerana fikarohana akustika sy informatika, Shanghai Advanced Research Institute,
Akademia siansa momba ny siansa
Tale teknika, Lehiben'ny injeniera
Injeniera zokiolona, ​​Wuhan Engineering Science & Technology Institute
Manampahaizana manokana momba ny akustika amin'ny fifandraisana
Piano Digital Upright, Electric Grand Piano, Piano mandeha amin'ny herinaratra, Piano nomerika lafo vidy, Kitendry Piano Smart, Fanamboarana Piano Digital,